Hanakana ny fahalalahan’ny media ve ny volavolan-dalàna momba ny heloka antserasera ao Trinidad sy Tobago? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jona 2018 5:14 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Magyar, English
“3D Data Security” sary avy amin'i Chris Potter, ccPixs.com, CC BY 2.0.
Miditra amin'ireo olana antserasera mampidi-doza ireo mpanao lalàna ao Trinidad sy Tobago — manomboka amin'ny fankahalana sy ny fanjonoana (phishing) ary ny hosoka — amin'ny volavolan-dalàna momba ny heloka antserasera, manaraka ny dian'ireo governemanta marobe manerantany izay nandany lalàna feno miady amin'ny heloka antserasera.
Samy naneho ny ahiahiny manoloana ireo ampahany manokana momba ny volavolan-dalàna nahitsy vao haingana izay mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalahana miteny ireo mpanao gazety sy mpisera tambajotra sosialy.
Nampahafantarina voalohany tamin'ny volana Martsa 2014, ahitana momba ireo heloka antserasera isan-karazany ny volavolan-dalàna, tafiditra ao anatin'izany ny sary mamoha fady atao valifaty, ny sary mamoha fady ahitana ankizy, ny kendaroroka, ny kabarim-pankahalàna ary ny fiarovana ny tsiambaratelom-pirenena, saingy niatrika tsikera avy amin'ny haino aman-jery izany tany am-boalohany noho ny Andininy faha-8, izay manameloka ny “fahazoana angon-drakitra an-tsolosaina tsy ara-dalàna” sy “mandray na mahazo fidirana amin'ny angon-drakitra (lahatahiry) sy mahafantatra fa azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna izany”.
Tahaka izany ny Lalàna mifehy ny fiarovana tahiry ao Jamaika, voatsikera mafy noho izy tsy mazava sy ny hamafin'ny sazy ho an'ireo mpanao gazety sy mpanao ampamoaka ny volavolan-dalànan'i Trinidad sy Tobago.
Araka ny volavolan-dalàna, izay rehetra hita fa meloka noho ny fandefasana angon-drakitra “tsy ara-dalàna” dia mety hiharan'ny onitra hatramin'ny TT $ 500,000 (eo amin'ny 75 000 dolara amerikana) sy/na telo taona an-tranomaizina.
Na dia mety ho toy ny fandikan-dalàna heloka bevava tsotra izao aza izany, dia mety hihitatra amin'ny zavatra toy ny famoahana ny antontan-taratasin'ny governemanta izay mety ho fitaovana ho an'ireo mpanao gazety sy mpikatroka miezaka hampandray andraikitra ny governemantany. Mbola manameloka ireo fihetsika ireo ny endriky ny volavolan-dalàna ankehitriny.
Nahatonga ny Fikambanan'ny Media ao Trinidad sy Tobago ho sahiran-tsaina mafy amin'izay antsoiny hoe “#shutuplegislation” [lalàna fampanginana] ny sazy mavesatra toy izany. Mpikambana maro ao amin'ny fikambanana no niresaka nandritra ny fivoriana vao haingana nataon'ny komity mahaleotena ao amin'ny parlemanta izay mandinika ny volavolan-dalàna.
Misolo tena ny Fikambanan'ny Media ao Trinidad & Tobago teo anoloan'ny komity mahaleotena ao amin'ny parlemanta misahana momba ny volavolan-dalàna #Cybercrime androany hariva ao Trinidad. Mandrahona ny hanohintohina ny #fahalalahan'ny gazety & manameloka ny asan'ireo mpanao gazety ny volavolan-dalàna.
Tamin'ny fivorian'ny komity, nandrisika ny mpanao lalàna mba hampiditra fepetra fiavahana noho ny tombontsoam-bahoaka ao anatin'ny volavolan-dalànan'ny heloka antserasera i Dr. Sheila Rampersad, filohan'ny komity fitantanana ny MATT misahana ny raharaha. Hoy izy:
[ny fiavahana tombontsoam-bahoaka] dia mitazona ny maha-tomponandraikitra amin'ny heloka bevava noho ny fanaovan-dratsy na fikasana ratsy, no sady miaro ny zo ara-dalàmpanorenan'ny olom-pirenena, ny fikambanana sy ny andrim-panjakana rehetra tafiditra amin'ny fananganana firenena amin'ny alalan'ny mangarahara lehibe.
Nandritra ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Global Voices, nanamafy ny Dr. Rampersad fa ny tolo-kevitry ny MATT momba ny fepetra tombontsoam-bahoaka dia “miaro ny mpanao gazety sy ny fikambanana hafa rehetra ary ny olona rehetra miasa ho amin'ny tombontsoam-bahoaka”.
Miantso ny lalàna momba ny Fiarovana Tahiry ho “olana sy lany andro”, nilaza i Rampersad fa mora iharan'ny famaizana heloka bevava noho ny fanalam-baraka sy ny fanosoram-potaka voalaza ao amin'ny Fizarana faha-8 ao amin'ny Lalàna momba ny fanalam-baraka sy fanosoram-potaka efa mananika ny 167 taona ny asa fanaovan-gazety, ary “mandrahona hanafoana ny fikasana tsara indrindra ho an'ny lalànan'ny Fahalalahan'ny vaovao” ny dika mifanohitra amin'izany.
Nilaza koa ny Dr. Emir Crowne, mpanolo-tsaina an-tsitrapo momba ny lalàna ao amin'ny MATT, fa “ny fananganana mahazatra ny sendikà dia avy amin'ny fahazoana lahatahiry tsy fantatra mazava” ary “raha tsy misy fanavahana amin'ny raharaha tombontsoam-bahoaka, dia mizaka mivantana ny sendikà”.
Efa tamin'ny taona 2016 ny MATT no nanolotra momba ny fepetra manokana voalohany, nandritra ny fifampidinihana tamin'ny biraon'ny Lehiben'ny Fampanoavana, izay nihevitra fa “midadasika loatra” ny tolo-kevitra.
Miahiahy momba ny hoavin'ny asany ireo mpanao gazety, raha lany ny volavolan-dalàna. Ao amin'ny iray amin'ireo lahatsorany maro momba ny raharaha, Mark Lyndersay nanamarika hoe:
Hita miafina ireo famerana hafa izay mety hampisy fiantraikany ratsy, tahaka ny iray mitantara momba ny famoahana ny antsipirian'ny didy (fitsarana), izay manakana ny olona eo ambanin'ny didy mba tsy hamoaka vaovao nampifanditra na efa natao ny didy na ny antsipirian'ny didy.
Ny andrasan'ny MATT dia aorian'ny fametrahana sy ny fanadihadiana ireo fepetra tsy mifanaraka amin'ny demaokrasia sy ny fanitsakitsahana ny lalàm-panorenana ao amin'ny volavolan-dalàna, hanaisotra ny volavolan-dalàna tsy hodinihana araka ny tokony ho izy na hampiditra ny fepetra tombontsoam-bahoaka natolotry ny fikambanan'ny media ao anatin'ny volavolan-dalàna ny komity mahaleotena ao amin'ny parlemanta.
Jamaika 16 ora izay